Posted by သက်ဝေ at 5:06 PM
maylay May 17, 2016 at 12:47 PM
ဆရာမတို့လမ်းလျှောက်ပုံလည်း မပါပါလားနော်။ စုံထောက်ကြီးသက်ဝေက ဘယ်က ပေါ်လာတာလဲဟင်။ တနေရာလေးပဲ ပါရ။ တခြားသော ဘလော့ဂါတွေဆီကိုပါ လည်ပတ်သွားပါကြောင်း :)
ဆွေလေးမွန် May 17, 2016 at 12:48 PM
ဟုတ်တယ် အစ်မသက်ဝေရေ . ခုလိုမျိုး ညနေပိုင်း လမ်းလျှောက်တာကိုတော့ အားပေးတယ်။ တစ်ကယ်လဲ စိတ်လွတ်လပ်ပေါ့ပါးသွားသလို ညအိပ်ရင်လဲ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်တော့ မနက်အလုပ်သွားချိန်ဆို တက်ကြွလန်းဆန်းနေရော။ လမ်းလျှောက်ရင် လူတွေကို အဲဒီလိုလိုက်ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေးတွေပေးတာကတော့ တူနေတယ်။
mgmgthan May 17, 2016 at 1:29 PM
လူ​တွေဟာ​သော့​ချောင်း​တွေလိုပဲ ... တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​ အမူအကျင့်​​တွေ မတူကြဘူး ... ဆင်​သ​ယောင်​​ယောင်​ ထင်​ရ​ပေမယ့်​ ထပ်​တူကျဖို့ ခဲယဉ်းတယ်​
TKLinn May 17, 2016 at 3:24 PM
Anonymous May 17, 2016 at 8:23 PM
ဘလော့က ဖုန်းနဲ့ ဖတ်မရဘူးအေ။ အိမ်ရောက်မှ ဖတ်ရတယ်။ ဂလို ကြော်ငြာတော့..တခြား ဘလော့တွေလဲ ဖတ်ဖြစ်တဲ့သူတွေ ဖတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော့။ ကိုယ်ကတော့ အန်တီတင့်ရဲ့ အပယ်ပိတ် ဘုရားဖူး ဖတ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘလော့တွေ မဖတ်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြီးကို ကြာနေပြီ။ တနေ့တနေ့ မျက်နှာစာအုပ်မှာဘဲ..သတင်း..အတင်း..မှတ်စရာ အဖုံဖုံ..ဇာတ်လမ်းစုံ။ မျက်နှာစာအုပ်က လူတွေကို စွဲလန်းအောင် နည်းမျိုးစုံ နဲ့ လုပ်ထားတယ်။
Ma Tint May 17, 2016 at 9:27 PM
မသက်ဆီကနေ ပို့စ်လေးတွေဖတ်ခွင့်ရဘို့ သော့ချက်ကိုသိသွားသလိုပဲ၊
တခါတရံတော့ ဆင်ခြေဆင်လက်လေးတွေကို အိပ်ခိုင်းထားလိုက်ပါကွယ်။
Tun Lin May 18, 2016 at 4:15 PM
ဒီ ပေ့ခ်ျ ကိုဒီနေ. မှ သက်ဝေ သီချင်း ရှာရင်းတွေ.တာ. လမ်း လျှော်ချိန် မြင်ကွင်း ကို ဖတ်ရတာ ကောင်းလွန်း လို. စာ ၀င် ထား သွား ပါ တယ်... စာ တွေ များ ကြီး ရေး နိုင် ပါ စေ...ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ..